Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo:Gaddaaf gadadoon uummata keenya Oromoo irraa hanga kaafamutti FXG guutuu Oromiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo:Gaddaaf gadadoon uummata keenya Oromoo irraa hanga kaafamutti FXG guutuu Oromiyaa
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo:Gaddaaf gadadoon uummata keenya Oromoo irraa hanga kaafamutti FXG guutuu Oromiyaa
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Gaddaaf gadadoon uummata keenya Oromoo irraa hanga kaafamutti FXG guutuu Oromiyaa makate hindhaabbatu!
1. Manaaf ardaa keenyarratti nu ajjeesanii nu gubuun haa dhaabbatu! Mana jireenya nurratti gubuun haa dhaabbatu! Nu qaluun haa dhaabbatu!
2. Ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu!
3. ABO dhabamsiisuuf duulli nutti banamee, yakka daguuggaa nurratti raawwachuuf jedhu nurraa haa dhaabbatu!
4. WBO’n irreef gaachana keenya!
5. Mootummaa Ce’umsaa nageenya keenya mirkaneessu nuuf haa dhaabbatu!
6. Sirni nu ajjeesaa waggoota dheeraa jiraate sirni EPRDF guututti haa diigamu!
7. Jijjiirraa sirnaa barbaanna!
8. Lafaaf qabeenyaa keenyarratti shororkaa’uun nurraa haa dhaabbatu!
9. Nageenyi uummata Oromoo haa mirkanaa’u!
10. Waraanni Liyyuu Ayilii haa diigamu!
11. Abdii Illee Seeratti haa dhiyaatu!
12. Yakkamtoonni seeratti haa dhiyaatan!
13. Olaantummaan seeraa haa mirkaanaa’u!
14. Qawween hinbullu!
OMN- FINFINNEE: QEERROO SHOW KUTAA 2FFAA (ADOL 15, 2018)
New Book: Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani